IMacOS yenza kube lula kuthi ukuba sikhangele iipakeji zekhuriya | Ndisuka mac
Nayiphi na inkqubo yokusebenza ye-Apple izisa nenani elikhulu lemisebenzi engaphezulu okanye engaphantsi efihliweyo. Ngamaxesha amaninzi baya kungabonakali, kodwa ukuba olu khetho luphucula indlela esisebenza ngayo, lusenza siyixabise ngendlela efanayo nobuchule obukhulu beMacOS yethu.
Ngeli xesha siza kubona inqaku elincinci lisetyenziswa ngokubanzi ukuba sifumana rhoqo iiphakeji ngekhuriya. Izicelo ezahlukeneyo zeMacOS ziyakwazi ukufumana isalathiso sokuhambisa ngepakeji Kwaye phantse ngomlingo, inxibelelana nephepha lemibuzo lenkampani yokuhambisa ngenqanawa, ukukuxelela ngokukhawuleza ukuba ziphi na izinto ozithunyelwayo.
Ukuqala, IMacOS Sierra iyakwazi ukufumana iinombolo zesalathiso sokuhambisa kwii-imeyile okanye imiyalezo, kodwa enyanisweni umtshina wethu unokusebenza phantse nasiphi na isicelo seMacOS. Siyazi ukuba ireferensi yokuhambisa ifunyenwe xa sibona inombolo yesalathiso ekrwelelwe umgca ngaphantsi.
Ngelo xesha, kufuneka siklikhawule kuloo nombolo. Ke iwindow pop-up kufuneka ivele kweli nani linye. Ngokwenyani, siza kubona iphepha le-safari elivula ngokudibanisa inani. Ukusuka kweli phepha, sinokulandelela ukuthunyelwa. Nangona kunjalo, ukuba sifuna ukwenza imibuzo okanye ngesizathu esithile inxenye yomyalezo ayivuli, singasoloko sicofa kwi Vula eSafari, ephezulu phezulu kwiwindows ezivelelayo ezibonisiweyo.
Namhlanje, olu phawu lusetyenziswa ngamandla kwiindawo ezithile zomhlaba. Kwiindawo ezithile zase-US phantse konke ukuthengwa kwenziwa ngeenkonzo zekhuriya. Ke ngoko, Luphawu esiza kulusebenzisa ngakumbi nangakumbi kwaye ke kulungile ukuba siyazi. Okokugqibela, ii-MacO zinalo msebenzi owenzelwe ezinye iinkonzo ngokunjalo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » IMacOS yenza kube lula ngathi ukuba silandele iiphakheji zekhuriya